Mootummaan TPLF Oromoo fi saboota Tigray hin tanee Qorchaan Baleessa jira: 01/08/2010
Motummaan TPLF Lamii keenya waan hundan baleessa jirtu kun lamii keenya qoorcha amayyan akka baduuf jeecha karroora dhokkisan deemsisa ture iffati hoji irra olcha jirti. Karroo maattii jeechudhan keessatuu dubartoon Oromoo akka Mucaa hin goodhanee goocha turte. Amoo kana irra darbee Hormoni ykn dubartoota anqaquu (firii) mucaa ta’uu humshuu xifumaa akka hin momishnee Kinini Karoora maatitii jeechuun Yaaka Sanyi Baleesu dalaga jira.
Dubatoon Qussanaa Maatti jeechuun dabaloon wayyane walga’iin rakkisuu irra darbanii mana isaa dhaquudhan qoorchaa fudhachuu qabduu jeechuun dirqisisa jiru. Bara 2004 keessa shamara umuuriin isaan 18_40 jiran hunda Kitibati sanyii baleesuu lacha turan. Kitbati kun kan keenamee Oromoyya keessati qoofa ture. Shakii Ogeesoon fi qeeqaa Ogeesoon fayya Oromoo tokko tokko kassan Annaleen Oromyya tokko tokko kitibata kana fudhachuu morman jiru. Yamuu sana goochaa ABO fi namoota murassati rawwatuu jeechuun Ogeesoota Oromoo hoji irra ala goocha turan. Garuu Shirri WAYANNE kun iffa bayee jira. Dubarooni yamuu sana Kitibata fudhatan mucaa fayya goochuu dadhaban akka du’aan garati ba’uu goodha ture. Gochaan sanyi nama baleesuu kun itii barmnan amoo dubartooni Harka isaa irra Gatiti isaan baqaqisan qoorcha dhaalaa durkuu keessa awaluti egalan. Dubarooni qoorcha sun Oprashini ykn Baqasaman galeef nami keessa basuu dhibee dhukkuba birraf saxilama tura. Yerro yerron isaa iti darbee mucaa goodhachuuf yaalan amoo Mucaan dhalatuu gara keessati du’ee ba’uun hamacha dhufee.
Mootumman yaakaman kun keessumatuu yerroo ama kana nami isaa to’aatee sxiluu bakka hin jireeti ummata keenya qoofati argatee waan barbadee irrati raawwata jira. Dubartooni Oromoo Yaakamtoota Habasha jalati kunfan namii dirmatuuf dhabbame Tigroon ‘Expermenti’ ykn meesha yaalaa irrati deemsifamuu ta’aan jiru. Ethiopia yamuu ama kana Hosptaloota hunda keessa nama ishee (Tigre) naqatee sanyui keenya baleessu irra dabarte Wajjira sanyii nama baleesu dhabatee jirti. Haaluuma kana Qussannoo Maatii Olola waayyane shamaran Oromoo rakko isaani yerrof iaaluun Kinili qoorcha liqimsaamu, Kan Harka keessa baqasan Awalamuu fi kan Gadameessa dubarti keessa ka’aan iti rabsa jiru, kana irra darbani ammo dhukuba adda irra isiin egga jeechuun Kitibata dubartii barba baran dhaalaa durkuu marifee keenafi ykn Warana jiru. Goocha isaan kana kan rawwatuuf amoo ‘Abba Tiyiitaa’ Tigrootan ijaramee hundeefatan jira. Waan nama diibuu keessa tokko Waldan Misooma Oromyya woggota 15 ol Oromiyya keessti dhaabatee misoomi ini hojeetu yoo jiratee Qorchaa dhaala dhorkuu Tigroon iti keena fi Kondomi Oromiyya keessati rabsuu qofaa. Kana Nugusichii Walda Misoommma Oromiyya Awaadi Jibirl(Lammi Warjii) ta’ee kun gaaf tokko waan hanga amati Hojeete seera durati dubachuun isaa hin oluu. Waldan misooma Tigray malii akka Naannoo isaaf Hojeete? Waldan Misooma Amara malii akka Naannoo isaaf Hojeete ? Waldan Misooma Oromiyya amoo Dubartoon Oromoo meeqa akka dhaaluu dhorkee ykn meeqaa akka Massensee raga ba’uun isaa hin oluu. Ergamtoon Tigree Goofata Ishee waliin Yaaka sanyii baleesuu hojeeta jirtuu irrati dirmachuu fi dura dhaabachuun Ogeessotta fayya Oromo qoofa irrati iaaluu akka hin qabanee hund Oromoo biyya keessaf biyya ala jira akka dirmatan goodhuun kan yerroo gaafatuu miti.
እ.ኤ.አ በ2008 በ382ሺ ሴቶች ላይ ከተካሄደው ጽንስ የማቋረጥ ሥራ መካከል 27 ከመቶ ያህሉ ብቻ በሕጋዊ መንገድ ተከናውኗል፡፡ ደኅንነቱ ያልተጠበቀ የጽንስ ማቋረጥ ያከናወኑ 52ሺ600 ሴቶች ደግሞ ሆስፒታሉ ገብተዋል፡፡ እንደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ እ.ኤ.አ በ2008 በሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች አማካይነት የወለዱት 20 ከመቶ የሚሆኑ ሴቶች ብቻ ናቸው፡፡ Sources;
Yerro ama kana amoo Labratooriy America heeduun isaa bara 1925 kassan sanyii nama baleesuu irrati booba’’an Nazi Geramanfi wara qoocha Isreal baleesuu Naziif hojeechuu gargaran, hara amoo TPLF waliin ta’aan lamii keenya qoorcha walfakatan Qusanno Maatiin qabani baleessa jiru. Oromoo bakka hunda fi sadarka hunda irra jirtan goochaa sanyii duguga TPLF demsisa jiru kana saxilun lamii keenya biyya jira akka isaan Qoorcha TPLF hin fayyadamnee fi Hakimoota Tigreen akka hin yaalamnee Midea Oromoo redio fi wabsite hundi xiyyefana akka iti latan dirqama lammuma akka batan biyya keessa namoon Oromo qaroo ta’aan iyyacha jiru. Oromo Laga isaa hunda Summin baleessa jiru, Lafa isaa harka fudhani nama biyya alaf hira jiru, Oromoo daldala keessa bassani jiru, Oromo magala isaa keessa lafa ini qabuu siiti guddatee jeechuun irra fudhacha jiru. Isaa cimmee isaan falmee hunda fara ummata jeechuun hidhani jiru, kan biyya aratani jiru. Ama Oromo isaan hin falmnee ilee akka mucaa hin goodhanee maseensaa jiru. Kampani America ilee TPLF gargarani dula sanyii baleessa Oromoo irrati raawwacha jiru, Mee source kana irrati xuqati goocha isaa rawacha turan fi waan wayyaane hojeecha jirtuu kana walinn madala???
Oromoo waan hundan falmachuun barbachisadha qami kun akkuma yaadatan kana dura laga Oromiiya(Qooqa fi kan birroo )suma’uu iyyacha turee, lafa Oromoo sama jiruu ragga hunda waliti qindeesun saxlilee jira. Midealee Oromoo Akka Oromiatimes fi dhaabblee akka OSA tokko tokko dafani waan kana irrati balaleefana isaan dhageesun ga’ee gudda hojeetan jiru. Kana malee Dhukubi Morma qufaa ykn Goiterr jeedhamu fi dukubalee dadaran Oromiyya darara jiruuu hunda saxiluu yaala ture amasi akkuma ragga biyya arganee waan baalaa heeduu fi shirra TPLF ummata keenya irrati dalaga jiru isiin dhiyeesina. Ergamtuun TPLF OPDOn Affan Oromoo Afaan biyyoleessa ta’uuf dandeeti hin qabuu, biyyatittii jeequmasa umma jeechaa turete Amoo Oromiyya Finfinne irra ga’ee Argachuun hin qabu jeete Ergamtoota Ishee Paarlamaa keessa jiran 178 TPLF fi Amhara gargaran akka kufuu goochuu isaan balina dhiyyoti dhiyeesinati nu hoordoofa.
Oromiyyani yoomi ilee tanan ni bilbisoommti !!!
Abban Gaanfa Afrika Oromoon Harka Tigree jalati hin hafuu!!!